Maalinta: 13-ka July, 2019
Daddralli wuu ku faraxsan yahay ciidanka
Doomaha 12, oo ka xayirnaa Dekadda Griiga ee Volos bil ka hor, waxay amartay Ordu, si ay u furto Badda Madow ee dalxiiska maraakiibta adduunka iyo inay sii wado halyeeygii hore ee Argonaut. Si inay ka qayb qaataan horumarinta badda hiwaayadda in Turkey [More ...]
Terminal Storey Junction 15 wuxuu furmaa July
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu cadeeyay in aysan ka gaabin maalgashiyadooda gaadiid waxa uuna cadeeyay dhameystirka Terminal Deck Junction Osman Kavuncu Boulevard. Madaxweyne Büyükkılıç, maalgashigan muhiimka ah ee uu sameeyay Qaranka Turkiga [More ...]
Dhismaha Xarunta Dhexe ee Derbent
2-18 ayaa xiray Xarunta Tababarka Derbent inta u dhaxaysa Maajo iyo Maarso oo ah mashruuc muujinaya mashruuca ka dhexeeysa Köseköy iyo Pamukova by Agaasimaha Guud ee Daladda Gobolka. Sida laga soo xigtay warbixinta Cemalettin Ozturk oo ka timid Ozgurkakaeli; "Derbent Neighborhood [More ...]
Volkswagen Turkiga oo Doortay Factory New
go'aan ka baqeeysa Jarmal Volkswagen AG ee inay maalgashi ku warshad cusub waxaa loo isticmaalay tan iyo Turkey. Volkswagen AG, oo ah hogaamiyaha ugu weyn ee gawaarida Jarmalka ee warshadaha gawaarida adduunka, waxay bilaabeen shaqo ay ku furayaan warshad cusub [More ...]
Eskisehir 15 Julaay iyo Gaadiidka Qamriga ee Gawaarida Bilaashka ah
Tareenada iyo basaska magaaladu waxay lacag la'aan ku tahay muwaadiniinteena si ay u gutaan booqashadooda fasaxyada iyada oo la raacayo go'aanka aan caadiga ahayn ee Golaha Magaalooyinka ee Eskisehir (Municipal Council of City Council). [More ...]
15 ee Gaadiidka Dadweynaha ee Antalya oo bila Bisha Julaay
Duqa magaalada Antalya Metropolitan Muhittin Böcek, '15 July Dimoqraadiyadda iyo Maaliyadda Midnimada Qaranka ayaa siiyay warka wanaagsan ee gaadiidka bilaashka ah. ANTRAY iyo Nostalgia Tram oo leh taarikada rasmiga ah ee degmada, 15 subaxnimadii Isniinta [More ...]
Tiknikada Jeeps ee Mareykanka Lufin
Dalka Mareykanka ee Nevada, 10 Ururka Tareenka Pacific ee Tareenka, oo haya jeeps cirif ah oo ku wareegsan 9.00 bishii July, jaahwareeray. Tiro badan oo jeeps ah ayaa noqda kuwo aan la isticmaali karin. Jeeps iyo pick-ups shilka [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha 15 Bilaash ah July
Muwaadiniinta, basaska magaalooyinka caasimadda ee Kobanheegan, nidaamka tareenka iyo gaadiidka badda ee maalinta Dimuqraadiyada iyo Maalinta Midawga Qaranka 15 ayaa ka faa'ideysan doona Isniinta, Julaay. Marka la eego macnaha guud, laga bilaabo maalinta Isniinta ee 06.00 [More ...]
Dhawaaqa Taksiga ee Badeecada Isgaarsiinta Si Kacsan ula soco Dhibaatooyinka Rakaabka
Annaga oo ah Dawlada Hoose ee Magaaladda Istanbul, waxaan si dhaw ula soconaa dhibaatooyinka ka dhex dhaca wadayaasha tagaasida iyo muwaadiniinta wakhti kasta. Labada koox ee Boliiska Magaalada ayaa shaqsi ahaantooda goob joog ka ahaa iyo khadka cad ee ALO 153 iyadoo la raacayo cabashooyinka [More ...]
Kaydinta Gawaarida Qaboojiyaha ee Renault Trucks
Global Ekspres waxay ballaarineysaa muggeeda ganacsiga ee safarada miraha cusub iyadoo la adeegsaneyso maalgashiga soo jiidashada ee Renault Trucks. Global Ekspres, oo xaruntiisu tahay Mersin, ayaa mas'uul ka ah soosaarka alaabada sida cuntada iyo dhir udgoon, gaar ahaan miraha iyo khudaarta cusub ee laga soo bilaabo Antalya ilaa Yurub. [More ...]
Pirelli wuxuu soo saaraa taayirada ugu adag ee 1 ee loogu talagalay Curricadaha Fast Fast ee UK Grand Prix!
Sannadkan Pirelli wuxuu u keenayaa saddexda taayir ee taxanaha taxanaha tartankii Silverstone: Cadaanka adag, dhexdhexaad dhexdhexaad ah iyo Cas oo jilicsan markii saddexaad kadib Baxrayn iyo Spain. Wadada orodka ee Ingiriiska [More ...]
Goorma ayaa la dhammeeyaa Tuulada Buca?
Diyaargarow ka socdo Magaalada Boosaaso ee Buca Subway Wasaaradda Gaadiidka Iskuduwaha Guud ee Maalgashiga Kaabayaasha ayaa ansixiyay. Mashruucaan, oo ka dhacaya qorshaha maal-galinta 2018 ee İzmir, wuxuu noqon doonaa xarun 13,5 kilomitir dheer oo metro ah. [More ...]
Xeerarka ciyaarta ayaa isbedelaya qaybta ganacsiga
Moodeelka 'Teknolojiyada kirada', oo wax uga beddeli kara DNA-ga qeybta mashiinnada si wax soo saar leh oo deg deg ah, ayaa sidoo kale beddeli doona qawaaniinta ciyaarta ee waaxda baabuurta. Gaar ahaan kala guurka shidaalka shidaalka iyo gawaarida korantada, isku-dhaanta iyo kuwa madax-bannaan [More ...]